ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဆွဲတချို့အခမဲ့အစီအစဉ်များဘာတွေလဲ? - မေးခွန်းနှင့်အဖြေ - 2019
ကွန်ပျူတာများ၏ယနေ့ကမ္ဘာမှာ ပို. ပို. ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာလှမျးမိုးပြံ့နှံ့။ အတော်များများကဒေသများတစ်ဦးကို PC များအသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲရိုးရိုးကူးဖြစ်ပါသည်: ရှုပ်ထွေးသင်္ချာတွက်ချက်မှု, ဒီဇိုင်း, မော်ဒယ်, အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်, etc နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကပုံဆွဲမှတက်လာ၏။ !
အခုတော့အနုပညာရှင်တွေ, ဒါပေမယ့်လည်းရိုးရှင်းတဲ့ချစ်သူများသာအလွယ်တကူအထူးအစီအစဉ်များအားဖွငျ့အခြို့သော "လက်ရာ" ဆွဲရန်ကြိုးစားနိုင်ပါ။ ဤတွင်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဆွဲရန်နှင့်ဤဆောင်းပါး၌အကြောင်းပြောဆိုချင်ပါတယ်သည်ဤအထူးအစီအစဉ်များဖြစ်ကြသည်။
1. Paint - default အနေဖြင့်ယင်းအစီအစဉ်ကို ...
2. GIMP - အစွမ်းထက်ဂရပ်။ အယ်ဒီတာ
3. MyPaint - အနုပညာပန်းချီ
4. ရာဖီတီပန်းချီစတူဒီယို - ရေးခွ၏ပရိသတ်များအဘို့
5. Artweaver - Adobe က Photoshop ကိုအစားထိုး
7. PixBuilder စတူဒီယို - mini ကို photoshop
8. Inkscape - Corel Draw analogue (vector ဂရပ်ဖစ်)
9. Livebrush - ဆွဲဖြီး
10. Tablet ကို
ဒါဟာ Paint မှဆွဲများအတွက်အစီအစဉ်များပြန်လည်သုံးသပ်အစပျိုးချင်ပါတယ်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒါဟာဆွဲဖွင့်ဖို့ဘာမှကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်အရှင် Windows XP ကို, 7, 8, Vista က, etc running လည်ပတ်မှုစနစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး, - ။ သငျသညျမလိုအပ်ပါဘူး!
ဒါကြောင့်ဖွင့်လှစ် "Start ကို / Programs ကို / ဆက်စပ်ပစ္စည်း" ကိုသွားပါ, ထို့နောက်အိုင်ကွန် "Paint" ပေါ်တွင် click လုပ်ရန်။
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုကိုယ်တိုင်ကအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့နှင့်မကြာသေးမီက PC များအပါအဝင်ပင်အတော်လေးတစ်ဦးမျက်နှာသစ်၏တန်ခိုးကိုနားလည်သဘောပေါက်။
အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များကို၏: အပုံအရွယ်အစား, ပုံသဏ်ဌာနျအချို့အစိတ်အပိုင်းများကိုဖြတ်တောက်, တစ်ဦးခဲတံနှင့်အတူဆွဲရန်စွမ်းရည်, ဖြီး, ရွေးချယ်ထားသောအရောင်နှင့်အတူထိုဒေသတွင်ဖြည့်စွက်, စတာတွေကိုပြောင်းလဲ
program ကိုအလုံအလောက်ထက်ပိုတပ်ဆင်ထား - ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပုံရိပ်တွေအတွက်တစ်ခါတစ်ရံငယ်သောအရာတို့ကိုအပေါ်တိုးတက်လာဖို့တစ်ခုခုလိုအပျသူပုံစေ့စပ်မရသူများ။ PC ပေါ်မှာဆွဲရန်မိတ်ဆက်စကားငါနှင့်အတူစတင်ရန်အကြံပြုဒါကြောင့်ပါ!
GIMP - ဂရပ်ဖစ်တက်ဘလက်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်မယ့်အားကောင်းတဲ့ဂရပ်ဖစ်အယ်ဒီတာ * (အောက်တွင်ကြည့်ပါ။ ), ပြီးတော့တခြားရိုက်သွင်းရေးကိရိယာများ။
- အရောင်မျိုးပွားမြှင့်တင်ရန်, သူတို့ကိုပိုပြီးကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းလုပ်ပုံတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်;
- အလွယ်တကူနှင့်အလျင်အမြန်ဓါတ်ပုံကနေမလိုလားအပ်တဲ့ element တွေကိုဖယ်ရှားပစ်;
- ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ဖြတ် layout ကို;
- စာသားများ, ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, အလွှာစသည်တို့သိုလှောင်ရန်တတ်နိုင်သောစီးပွားဖြစ်ပုံစံဖိုင်သိုလှောင်မှု ".xcf", ။
- clipboard ထံနဲ့အတူလုပ်ကိုင်ဖို့အဆင်ပြေအခွင့်အလမ်း - သင်ချက်ချင်းကိုပရိုဂရမ်သို့ပုံထည့်သွင်းခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်ဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်;
- GIMP image ကိုသိမ်းဆည်း "ဟုအဆိုပါယင်ကောင်ပေါ်တွင်" လုံးဝနီးပါးခွင့်ပြု;
- ".psd" နဲ့ဖိုင်တွေဖွင့်ရန်စွမ်းရည်,
- မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် plug-in ကို (သင်လျှင်, သင်တန်း, ထို programming ကိုကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်) ။
MyPaint - ထွန်းသစ်စအနုပညာရှင်တွေအပေါ်အာရုံစိုက်ကြောင်း graficheky အယ်ဒီတာ။ အဆိုပါအစီအစဉ်ပတ္တူ၏န့်အသတ်အရွယ်အစားနှင့်အတူဒွန်တွဲနေတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ interface ကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။ ဤအစီအစဉ်အားဖွငျ့သငျသညျ့ကင်းဗတ်ပေါ်မှာကဲ့သို့ပင်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ရုပ်ပုံများကိုရေးဆွဲနိုင်သည့်မှတဆင့်စုတ်တံ့ကြီးမြတ်အစုံ,!
- စုတ်တံ၏ကြီးမားသောရွေးချယ်ရေး, သူတို့ရဲ့ setting ကို, ဖန်တီးခြင်းနှင့်တင်သွင်းများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေ;
- အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ထောက်ခံမှုလမ်းဖြင့်ပန်းကန်, ယေဘုယျအားဖြင့်ထို program, သူ့ကိုများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲလျက်ရှိ၏
- န့်အသတ်ပတ္တူအရွယ်အစား - သင့်ဖန်တီးမှုကန့်သတ်ရန်ဤသို့ဘာမျှမ;
- ကို Windows, Linux နဲ့ Mac OS အတွက်အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်း။
ဒီပရိုဂရမ် (မူအရထို program ၏ညှနျကွားနှငျ့သငျနာမညျကိုကနေခန့်မှန်းနိုင်သည်) ရေးခွ၌ရှိသမျှသောပရိတ်သတ်များအားဖြင့်ပျော်မွေ့ပါလိမ့်မည်။
သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောအစီအစဉ်ကိုယင်း၏ရိုးရှင်းဖြစ်ပါသည်, သရုပ်မှန် - ပန်းချီနီးပါးပညာရှင်များ၏နံရံပေါ်မှာအကြီးမြတ်ဆုံး hits ကဲ့သို့ကလောင်မှလာကြ၏။
အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်, သငျသညျနောက်ထပ်သူ့ရဲ့ဖန်တီးမှုအံ့ဖွယ်အလုပ်မလုပ်သောအထည်, ဥပမာ, ကားများ, မြို့ရိုး, ဘတ်စ်ကား, ရွေးချယ်နိုင်သည်။
100 ကျော်အပိုငျးပိုငျး - ကပြားတွင်အရောင်ရွေးချယ်မှုကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏကိုပေး။ ဒါပေါ် Smudge စေမျက်နှာပြင်မှအကွာအဝေးကိုပြောင်းလဲရန်, အမှတ်အသားများကိုအသုံးနှင့်အဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ရေးခွအနုပညာရှင်တစ်ဦးလက်နက်တိုက်!
အခမဲ့တည်းဖြတ်ဆော့ဖ်ဝဲကိုအများဆုံးကို Adobe Photoshop ကိုဖွစျဖို့ဆိုပါတယ်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုဒါပေါ်၌ဆီကိုပန်းချီ, ဆေးသုတ်, ခဲတံ, မြေဖြူတွေသုံးပြီး, ဖြီးနှင့်တက်ကြွလာသည်။
အောက်က screenshots များသဖြင့်အရပ်ရပ်စသည်တို့ကိုရှိအလွှာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည်, ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများမှပုံရိပ်များအဖြစ်ပြောင်းလဲ, compression - ။ ပင်ကို Adobe Photoshop ကိုမှခွဲခြားခြင်းကိုမ!
SmoothDraw - အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တည်းဖြတ်ရေး, ရုပ်ပုံများရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဖန်ဆင်းခြင်းအဘို့အခွင့်အလမ်းအများအပြားနှင့်အတူ။ အခြေခံအားဖြင့်ပရိုဂရမ်ကိုအဖြူနှင့်သန့်ရှင်းသောပိတ်ချောနှင့်အတူခြစ်ရာကနေပုံရိပ်တွေကိုအာရုံစိုက်နေသည်။
ဒါပေါ်စုတ်တံ, ခဲတံ, ခြံ, ခြံနှင့်: သင်၏လက်နက်တိုက်အတွက်ဒီဇိုင်းနှင့်အနုပညာ tools များ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်အားဖြစ်လိမ့်မည်။
မဖြောင့်အတော်လေးမကောင်းတဲ့ယခုအစီအစဉ်၏အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေ interface ကိုအတူ coupled Tablets, ထောက်ခံပါတယ် - ကလုံခြုံစိတ်ချစွာအများဆုံးအသုံးပြုသူများအကြံပြုနိုင်ပါသည်။
network ပေါ်မှာဒီပရိုဂရမ်အတော်များများသည်အသုံးပြုသူများပြီးသားအသေးစားကို Photoshop အမည်ပေးထားကြသည်။ ဒါဟာ paid အစီအစဉ်ကို Adobe က Photoshop ကို၏လူကြိုက်အများဆုံး features တွေနဲ့စွမ်းရည်ရှိပါတယ်: Editor ကိုအရောင်အဝါများနှင့်ဆနျ့ကငျြဘ, ရုပ်တုဆင်းတုများကိုပြောင်းလဲ, ဖြတ်တောက်ဘို့ tools တွေရှိပါတယ်, သင်ရှုပ်ထွေးပုံစံမျိုးစုံနှင့်တ္ထုကိုဖန်တီးနိုင်သည်။
မဆိုးပုံရိပ်မှုန်ဝါးအတော်ကြာအမျိုးအစားများအကောင်အထည်ဖော်ရေး, သက်ရောက်မှုထက်မြက်, ဒါကြောင့်ထွက်။
ထိုကဲ့သို့သောပုံရိပ်တွေအရွယ်အစားကိုချုံ့နေဆဲအဖြစ် Pro ကိုအင်္ဂါရပ်တွေ, etc, လှည့်, လှည့် - ။ ဆိုသညျကား, သင်ဖြစ်ကောင်းမဟုတ်သင့်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် PixBuilder စတူဒီယို - ကွန်ပျူတာကိုအပေါ်ဆွဲခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်ခြင်းများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
ဤသည်အခမဲ့အားနည်းချက်ကိုပုံရိပ်ကိုအယ်ဒီတာ, Corel Draw တစ်ခု analogue ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ - ဤအစီအစဉ်တွင် virus သယ်ဆောင်ဆွဲဘို့ဖြစ်၏ ညွှန်ကြား segments များ။ အရည်အသွေးအရှုံးမရှိဘဲပုံရိပ်တွေ၏အရွယ်အစားပြောင်းလဲပစ်ရန်လွယ်ကူသောအားနည်းချက်ကို - bitmap ပုံရိပ်တွေမတူဘဲ! များသောအားဖြင့်ယင်းအစီအစဉ်ကိုပုံနှိပ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုသည်။
ဒီမှာ Flash ကိုဖော်ပြရကျိုးနပ်သည် - သိသိသာသာဗီဒီယို၏အရွယ်အစားလျှော့ချဖို့ခွင့်ပြု, vector ဂရပ်ဖစ်လည်းအသုံးပြုပါသည်!
ပုံရိပ်တည်းဖြတ်ခြင်းများအတွက်ကောင်းသောအခွင့်အလမ်းများနှင့်အတူအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ပုံဆွဲပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအယ်ဒီတာ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များတစ်ခုမှာသင်ကဆွဲရန်ဒီမှာပါလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည် ဝက်မှင်ဘီး! အဘယ်သူမျှမကအခြား tools တွေနဲ့!
တဖကျတှငျဤအကန့်သတ်, ဒါပေမယ့်အခြားတစ်ဖက်တွင်, program ကိုအဘယ်သူမျှမကအခြားအတွက်အများကြီးအဘို့ခွင့်ပြုပါ - သင်ဤသို့ပြုဘူး!
သူတို့ကို setting စုတ်တံ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်, ဒါပေါ်မှာလေဖြတ်ခြင်းနှင့်။ ထို့ပြင်စုတ်တံသင်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးသို့မဟုတ် Internet မှဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။
စကားမစပ် livebrush ရှိ "ဖြီး" "ရုံရိုးရှငျး" လိုင်း, ဒါပေမယ့်လည်းရှုပ်ထွေးသောဂျီဩမေတြီပုံစံမျိုးစုံတစ်မော်ဒယ်နားမလည်အောက်မှာ ... ယေဘုယျအားကအားလုံးကိုချစ်သူများဂရပ်ဖစ်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေရန်အကြံပြုသည်။
ဂရပ်ဖစ်တက်ဘလက် - ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဆွဲရန်အထူး device ကို။ ဒါဟာစံကို USB ကနေတဆင့်သင့်ကွန်ပျူတာသို့ချိတ်ဆက်။ သင်အီလက်ထရောနစ်စာရွက်မောင်းများနှင့်ကွန်ပျူတာ screen ပေါ်မှာချက်ချင်းအွန်လိုင်းကသူ၏ရုပ်ပုံလွှာတွေ့နိုင်ပါသည်တံကိုသုံးပါ။ ဂရိတ်!
တက်ဘလက်အသုံးဝင်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်နာမသာပေမယ့်လည်းသာမန်ကျောင်းသားများနှင့်ကလေးများရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်နှင့်အတူ, သငျသညျ, ဓါတ်ပုံများနှင့်ရုပ်ပုံများကိုတည်းဖြတ်နိုင်သည်လျင်မြန်စွာလူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်ရေးခွဆွဲနဲ့အလွယ်တကူဂရပ်ဖစ်စာရွက်စာတမ်းများအတွက်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ပါစေ။ အပြင်, ကလောင် (ကလောင်တက်ဘလက်) တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါထိုကဲ့သို့သော mouse ကိုသုံးပြီးတဲ့အခါမှာအဖြစ်အချိန်ကြာမြင့်စွာလည်ပတ်စဉ်အတွင်းပင်ပန်းလက်ကောက်ဝတ်နှင့်လက်, မရပါဘူး။
ပညာရှင်များသည်အဆိုပါဓါတ်ပုံတည်းဖြတ်ရန်စွမ်းရည်ဖြစ်ပါသည်: မျက်နှာဖုံးများ၏ဖန်ဆင်းခြင်း, retouch, ပြင်ဆင်ရန်နှင့်ပုံရိပ်တွေ၏ရှုပ်ထွေးသောခကျြအောအပြောင်းအလဲများကို (ဆံပင်, မျက်စိ, etc) လုပ်ရမည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်, တက်ဘလက်အလွန်လျင်မြန်စွာဖို့အသုံးပြုရခြင်းဖြစ်သည်နှင့်သင်မကြာခဏ rabotaeete ဂရပ်ဖစ်လျှင်, device ကိုရိုးရှင်းစွာအစားထိုးလို့မရတဲ့ဖြစ်လာ! ဒါဟာဂရပ်ဖစ်အပေါငျးတို့သချစ်သူများရန်အကြံပြုသည်။
ထို program ၏ဤသုံးသပ်ချက်ကိုခုနှစ်တွင်ပြီးဆုံးသည်။ အောင်မြင်သောရွေးချယ်မှုနဲ့လှပတဲ့ဓါတ်ပုံတွေ!